Maamulka Bakool Sare oo Madaxtooyo Cusub Dhagax Dhigay – Radio Daljir
Diseembar 31, 2015 7:23 b 0
Khamiis, December 31, 2015-(Daljir)- :Madaxweynaha maamulka Cusub ee Bakool sare Axmed Nuur Shiikh Maxamed ayaa madaxtooyo shalay ka dhagax dhigay degmada Bardaale oo maamulka lagu asaasay.
Waxaa ka qayb galay Xildhibaano kasoo jeeda Bakool oo dowladda Fadaraalka ku jira iyo Saraakiil kale,waxaa uu sheegay madaxweynuhu inu dhawaan soo dhisi dono xukuumadd u shaqaysa dadka ay matalayaan,isagoo intaa ku daray inuu hada ku mash quulsan yahay sidii loo dhisi lahaa ciidan awood leh.
Madaxweynaha iyo wafti uu hogaaminayo ayaa la filayaa dhawaan inay aadan wadamada Kenya iyo Ethiopia, waxaa la sheegay inay kawada hadli doonaan wada shaqayn ay yeeshaan, iyo sidii tageero uu Bakool sare uga heli lahaa dalalkaas.
Dhan kale shalay waxaa magaalada Muqdisho isku casilay Xildhibaan Faarax Sheekh Cismaan Cabdi oo kamid ahaa Xildhibaanada Cusub ee maamulka Koonfur galbeed.
Shir’uu ku qabtay Muqdisho ayuu sheega in beeshiisu aysan maamulka Koonfur galbeed ka helin saamigii ay lahaayeen,Wasiirka dalxiiska ee maamulka Koonfur galbeed ayaa isna is casilay, wuxuuna sheegay in beeshiisa ay ku biirayso maamulka Cusub ama mid kale dhisanayaan,isagoo sheegay in beeshiisu aysan helin waxay xaq ulahaayeen.